Ogaden News Agency (ONA) – Taliska TPLF oo Xukumay Siyasiyiin iyo Suxufiyiin u dhashay Ethiopia iyo Cabsi soo food saartay Addis-Ababa
Taliska TPLF oo Xukumay Siyasiyiin iyo Suxufiyiin u dhashay Ethiopia iyo Cabsi soo food saartay Addis-Ababa
Posted by ONA Admin	/ January 27, 2012
Addis Ababa: Maxkamad kusheegta TPLF ee ku taala Addis Ababa ayaa xukun xabsi daayima ku xukuntay suxufiyiin iyo siyasiyiin Ethiopian ah kuwaas oo ay ku xukuntay xabsi daayim ah. Maxkamada ayaa sheegtay inay wadeen dadkani Mudaharado larabay in lagu afganbiyo Males Zenawi, waxayna qorsheynayeen inay Isgaadhsiinta Ethiopia inay burburiyaan iyo waliba Korontada.
Suxufiyiintan beenta lagu xukumay ayaa waxa ay qaarkood ku noolyihiin wadanka dibadisa sida USA. Suxufiyiintan la xukumay oo xukunkooda kala gadisna waxaa kamid ahaa Gudomiye ku xigeenka wargeyska Awramba Times oo mar hore albaabada loo laabay wargeyskaas. Sidoo kale waxa kamid ah qoraaga wargeys todobaadle ah oo lagu magacaabo Weekly Fetch.
Waxaa kale oo dadka la xukumay kamid ahaa siyaasiyiin ka tirsan mucaradka oo balse si nabad galyo ah ugu dagalamayay qalinkooda. Waxaana kamid ahaa Zerihun Gabre iyo Hirut kifle oo midkiiba lagu xukumay 17 sanno iyo 19 sanno sida ay u kala horreyaan.
Taliska TPLF oo gacan ku dhiigle ah ayaan oggoleyn wax kasoo horjeeda ama eedeymo usoo jeediya, waxuuna caadeystay innuu shacabka iyo siyasiyiintaba uu ka hortago isaga oo isticmalaya xadhig iyo jidh dil ilaa heer uu dilal geysto joogta ah midkaas oo sharciyaysan.
Waxa taliska TPLF sameysteen sharciyo ay dadka ku cunaqabateeyaan oo ay ugu yeedhaan qofkasta oo fikrad leh kana dhiidhiya damiirka xun ee TPLF inay yihiin argagaxiso taas oo maxkamad ku sheeg ay ku xukumaan xabsi daayima ama heer toogasho qofkii ka horyimada.
Waxaa cabsi badan ay Woyanuhu ka qabaan magalada Adis Ababa oo guux weyn ka taaganyahay lana filayo in hal mar shacabku dibada usoo baxaan oo ay afganbi ku sameyaan taliska laangaabka ah ee Woyanaha oo ah mid sharcidaro ku jooga iyo gumeysi.
Taliska Woyanaha ayaa cadaadis badan kasoo fuuley wadamada Ree galbeedka waxaana uu noqday wadanka Afrika ugu horeeya dhanka xidhayga wariyaasha. midaas oo midwoga suxufiyiinta caalamku ay eedeymo ugu soo jeediyeen Ethiopia.
Dhulka somalida Ogadeniya oo ah dhul gumeysiga Abbysinia ku hoos jira looma oggola suxufiyiin iyo in laga sameeyo wargeysyo toona.